सृजना पाण्डेय - | Nagarik News - Nepal Republic Media
सृजना पाण्डेयका लेखहरु :
विद्यालय तहमा प्रवेश परीक्षाको औचित्य
विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ । यतिखेर तपाईं हामीमध्ये कतिपयले बाध्यताले अथवा रहरले पुराना स्कुल छोडेर आफ्ना नानीबाबुलाई नयाँ स्कुलमा भर्ना गर्ने तरखर गरिरहेका हुन सक्छौँ । नाम चलेका निजी स्कुलले भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिने भएकाले त्यसको तयारी पनि गराइरहेका हुन सक्छौँ । खासमा के हो त प्रवेश परीक्षाको रहस्य ? त्यसबारे चर्चा गरौँ ।
सृजना पाण्डेय ४ चैत्र २०७६ मंगलबार १८ मिनेट पाठ
चकलेटः कति फाइदा कति बेफाइदा
टिनएजका केटाकेटीले अमिलो–पीरो मन पराएजस्तै बालबालिकाले गुलियो मन पराउँछन् । यो उनीहरूको स्वभाव हो । गुलियोको मात्रा अत्यधिक हुने चकलेट अहिले गाउँदेखि सहरसम्म गरिबदेखि धनीसम्म, सबैको पहुँचमा छ । बजारमा सबैतिर पाइने सस्तादेखि महँगासम्म धेरै प्रकारका चकलेट अहिले सजिला कोसेली र उपहार पनि भएका छन् ।
सृजना पाण्डेय ९ माघ २०७६ बिहीबार १३ मिनेट पाठ
बालबालिकालाई दसैंको बिदामा कसरी खुसी राख्ने ?
बालकदेखि वृद्धसम्म महिला पुरुष सबै नेपालीका लागि खुसी लिएर आउने चाड हो दसैं । आफन्तसँगको भेटघाट, नयाँ ठाउँको घुमघाम, नयाँ लुगा, टीका–जमरा यिनै हुन् दसैँलाई रमाइलो बनाउने कुराहरू । नेपालीहरूको महान् चाड भएकैले दसैंमा विद्यालयहरूले बालबालिकालाई लामो बिदा दिएका हुन्छन् ।
सृजना पाण्डेय २७ आश्विन २०७६ सोमबार २३ मिनेट पाठ
विश्वव्यापी मान्यताअनुसार १८ वर्षभन्दा मुनिका केटाकेटीलाई बालबालिका मानिन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा १६ वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिलार्ई बालबालिका मानिएको छ ।
सृजना पाण्डेय १३ भाद्र २०७६ शुक्रबार १६ मिनेट पाठ
अभिभावक किशोर–किशोरीको मार्गदर्शक हुनुपर्छ
तेह्र–चौध वर्षदेखि करिब बीस वर्षसम्मको उमेर किशोर अवस्था हो। यो जीवनको असाध्यै महत्त्वपूर्ण समय हो। यस अवस्थामा शारीरिक परिवर्तन र संवेगात्मक परिवर्तन तीव्ररूपमा भइरहेका हुन्छन्।
सृजना पाण्डेय १२ असार २०७६ बिहीबार १७ मिनेट पाठ
शिक्षा मनोविज्ञानले भन्छ– ६ वर्षको उमेरदेखि स्कुल उमेर सुरु हुन्छ। ६ वर्षभन्दा पहिले बालबालिकाहरू शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वताको कमीले स्कुल जाने उमेरमा पुगेका हुँदैनन्।
सृजना पाण्डेय २० वैशाख २०७६ शुक्रबार २० मिनेट पाठ
सृजना पाण्डेय २८ पुस २०७५ शनिबार १९ मिनेट पाठ
नयाँ दुलही परिवारमा कसरी समायोजित हुन्छिन् ?
विवाह दुई फरक परिवेशमा हुर्केका केटा र केटीले एउटै परिवार बनेर सहयात्रा आरम्भ गर्ने बिन्दु हो । नेपालको सामाजिक परिवेशअनुसार विवाहपछि दुलही दुलाहाको घर जानुपर्छ। आफू जन्मेहुर्केको परिवार छोडेर नयाँ परिवारमा समायोजित हुनुपर्ने भएकाले उनलाई सुरुमा असहज लाग्नु स्वाभाविकै हो । यसरी नयाँ परिवारको सदस्य बनेर जाँदा त्यहाँ घुलमिल हुन कसरी सहज हुन्छ भन्ने कुरामा दुलहीको आफ्नै, दुलाहाको, दुलाहाका परिवारको र दुलहीका माइतीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसबारेमा आफ्नो ठाउँबाट कसले कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चर्चा गरौँ ।
सृजना पाण्डेय २७ मंसिर २०७५ बिहीबार १५ मिनेट पाठ
बिदाको कुरा सुन्नेबित्तिकै प्रायः बालबालिका खुसीले फुर्किन्छन् । अझ २०–२५ दिनको बिदा आयो भने त उनीहरूमा खुसीको सीमा रहन्न । छुट्टी रे छुट्टी भन्दै खुट्टो उचालेर नाच्न पो थाल्छन् ! यता अभिभावकलाई भने बालबालिकाको बिदा भयो भन्ने सुन्नासाथ टाउको दुखाइ सुरु हुन्छ।
सृजना पाण्डेय ३ कार्तिक २०७५ शनिबार २३ मिनेट पाठ
परिवार सँगै छैन दसैँ खल्लो लाग्छ
नेपाली समाजमा रिनधन गरेर भए पनि दसैँ रमाइलो गरी मनाउने चलन छ । हुनेखानेले मात्र होइन हुँदा खानेले पनि वर्षमा एकचोटि नयाँ लुगा र टीका–जमरा लगाएर ठाँटिने र वर्षभरिका पिरबेथा भुल्ने चाड हो दसैँ । कसैले केही मोज गर्यो भने नेपालीमा भनाइ नै छ– ‘यसलाई त दसैं पो आएछ ।’
सृजना पाण्डेय १ कार्तिक २०७५ बिहीबार १८ मिनेट पाठ
सृजना पाण्डेयका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्